Madaxweynihii Liberia oo Maxkamadda Dembiyada Dagaalka ee Hague ay ku Heshay dembiyo dagaal | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynihii Liberia oo Maxkamadda Dembiyada Dagaalka ee Hague ay ku Heshay dembiyo...
Madaxweynihii Liberia oo Maxkamadda Dembiyada Dagaalka ee Hague ay ku Heshay dembiyo dagaal
Hague-(Berberanews)- Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia, Charles Taylor, ayaa Maxkamadda caalamiga ee the Hague waxay ku heshay denbi ah inuu gacan siinayay, isla markaana dhiirri-gelinayay Jabhaddii Sierra Leone ee (RUF) intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee dalkaas ka socday.
Waxa lagu helay danbi ah inuu si joogto ah hub iyo saanad Ciidan u siinayay Jabhaddaas.Dagaalkii Sokeeye ee Sierra Leone waxa waday Jabhado, dadka si xun u dilayay, isla markaana burburinayay Magaalooyinka iyo Tuulooyinka dalkaas.
Dacwad oogaha kiiskan wadaa waxa uu sheegay ninka Aabbaha u ahaa ololahaasi aragagixiso inuu ahaa Charles Taylor oo xilligaasi ahaa Madaxweynihii Liberia. Laakiin, 2006 ayaa la xidhay Charles Taylor oo la geeyay Maxkamadda the Hague si maxkamad loo saaro. Waxaase uu mar walba beeniyaa inuu hubeeyay Jabhaddii la dagaallamaysay Sierra Leone.
Waxa ay Dacwad-oogayaashu ku doodayaan in Charles Taylor, ujeeddadiisu ahayd inuu ka macaasho Dheemmanka Sierra Leone. Gabadha Modelka ee Naomi Campbell ayaa loogu yeedhay inay caddeyn bixiso. Waxaa lagu eedeeyay inay ka qaadatay Dheeman Xaaska Taylor mar ay ku kulmeen xaflad samafal oo uu martigeliyay Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Mr. Nelson Mandela 1997.
Naomi Campbell waxa ay Maxkamadda u sheegtay in aanay ogeyn halka ay ka yimaaddeen dhagaxaanta yar ee wasakhda badnaa. Waxaana Xaaska Taylor ay sheegtay in ay been tahay in marna aanu ka ganacsan hub ee dheemanka.
Kooxda Garyaqaannada ah ee u doodeysa Mr. Charles waxay sheegeen in hoggaamiyaha hore ee Liberia ay shirqool siyaasadeed ku sameeyeen dalal reer Galbeed ah, kuwaasi oo ka hortagaya in Charles Taylor uu ku laabto awoodda Galbeedka Afrika, sida ay baahisay BBC-du.
Previous articleUrurka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo cambaareeyey Weriye si sharci-darro ah Xukuumaddu ugu xidhay Ceerigaabo
Next articleAl-Shabaab oo Hanjabaad culus u jeedisay Maamulka Madaxweyne Faroole ee Puntland iyo halista amni ee ka soo fool-leh